I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography
Ikhaya AMAKHASI E-CLASSIC I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba ephelele yeLendabuko lebhola lezinyawo eliyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; 'Fenomeno'. I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye ne-OFF kanye ne-ON-Pitch amaqiniso amancane awaziwa ngaye. Lets Begin.
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -Ukuphila Kwengane Ekuqaleni
URonaldo Luis Nazario de Lima Isithombe sokuBantwana
URonaldo Luis Nazario de Lima wazalwa ngo-18th kaSepthemba 1976 eRio de Janeiro, eBrazil nguyise, u-Nelio Nazario de Lima, uSrr nomama, uSonia dos Santos Barata. Wayengumntwana wesithathu walowo mbhangqwana.
URonaldo Luis Nazario de Lima uvela emndenini ompofu owahluleka ukumthumela esikoleni. Wayebhekwa njengengane yengane eminyakeni yakhe ekhulayo ikakhulukazi endaweni yezifundiswa. Ukuthuthuka kwakhe nokusebenza kahle esikoleni kwafinyelela umvuthwandaba kuze kuphele iminyaka ye-11 lapho kwenzeka okungalindelekile. Abazali bakhe, u-Nélio Nazário de Lima noSônia dos Santos Barata, bahlukana futhi bahamba ngezindlela ezihlukahlukene ngenkathi engu-11 kuphela. Njengoba engekho owayengamnakekela, uRonaldo Luis Nazario de Lima kwadingeka aphume esikoleni. Njengaleso sikhathi, indlela kuphela yokuthola imali encane kwakuzodlala imincintiswano yemidlalo yasemgwaqeni. Uthole uthando emdlalweni webhola lezinyawo ekufuneni ukusinda.
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -Ubudlelwano Nokuphila Komndeni
Ukuphila kobudlelwane bukaRonaldo Luis Nazario de Lima kwasakazwa ngonyaka ka-1997 lapho ehlangana nomfanekiso waseBrazil nomdlali we-actress USusana Werner ngubani owamdumisa e-Brazilian ithelevishini ye-soap opera ebizwa ngokuthi 'Malhacao'.
Ubuhlobo bukaRonaldo noSusana Werner
Isicelo sakhe sokufakwa eziqhingini ezintathu samukelwe. Bobabili bathandana lapho behlangana. Lokhu kwaholela ebuhlotsheni besikhathi eside okwenzeka kuze kube sekuqaleni kwe-1999.
Ukuphela kobudlelwane obulodwa kwakusho ukuqala komunye umhlukumezi ozithola ephezulu kunabo bonke uhlu lwamadoda abafisa abesifazane. Kamuva ngalolo nyaka, uRonald wathandana nomdlali waseBrazil owayengumfana waseMelika uMilene Domingues.
Ubuhlobo bukaRonaldo noMilene Domingues
Akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuba ukhulelwe. Lapho ebona ukuthi ukhulelwe, uRonaldo wamyisa ekushintsheni. Bobabili bashada ngo-Ephreli, 1999. Ngo-6th ka-Ephreli 1999, uMilene wazala indodana yokuqala kaRonaldo, uRonald eMilan.
URonaldo noMilene, bemukela ingane yabo
Umshado wabo wagcina iminyaka engu-4 ngemuva kwalokho bahlukanisa.
Ku-2005, uRonald wazinikela emfanekisweni waseBrazil noMTV Star Daniela Cicarelli owakhulelwa kodwa wahlukana.
Ubuhlobo babo bebufushane kakhulu. Kwaphela izinyanga ezintathu kuphela ngemva komcimbi wabo womshado othakazelisayo obiza nge £ 700,000.
Ngalowo nyaka 2005, uRonaldo wenza a ukuhlolwa kwabazali futhi waziqinisekisa ukuthi unguyise womfana ogama lakhe lingu-Alexander.
Lo mfana wazalwa ngemuva kokuhlangana kukaRonaldo noMichele Umezu, umlindi waseBrazil uRonaldo owahlangana okokuqala eTokyo, e-2002.
I-Scandal: Ngomhla ka-Ephreli 2008, uRonald wahlanganyela ekuhlaselweni okubandakanya abathathu Owayegqoka izifebe ezahlangana naye ebhokisini lebusuku elisedolobheni Rio de Janeiro. Lapho bebona ukuthi babesilisa ngokomthetho, uRonaldo wabanikeza u-$ 600 ukuhamba. Omunye walaba abathathu, manje oshonile u-Andréia Albertini ufuna i-$ 30,000. Kamuva wadalula leli cala abezindaba. Umshado wakhe noMaria Beatriz ukhanseliwe ngokushesha ngemuva kokukhwabanisa. Ngemuva kokucaciswa okuningi ngale nkinga, ubuhlobo babo buqala kabusha. Ngalesi sikhathi, uthando lwabadla.
Uphuma naye esidlangalaleni futhi wonke umhlaba wazi ukuthi uzobe eseshaya.
URonaldo noMaria (Uthando lokuphila kwakhe)
Ngomhla ka-XNUM ngo-Disemba 24, uMaria Beatriz Antony wazala indodakazi yabo yokuqala, uMaria Sophia, eRio de Janeiro.
Ngo-Ephreli 2009, wonke umndeni wathuthela esisha i-penthouse eSão Paulo. Ngo-6 April 2010, uMaria Beatriz Antony wazala indodakazi yabo yesibili, uMaria Alice eSão Paulo. Ngokufanayo, uMaria Alice wazalwa ngosuku olufanayo, iminyaka eyi-10 ngemuva kokuba umfowabo omdala uRonald azalwe.
Ngemuva kokuqinisekiswa kwengane yakhe yesine, uRonald uthe ku-6 December 2010 ukuthi wayenalo vasectomy, "ukuvala ifoni", ukuzwa ukuthi ukuba nezingane ezine kwakwanele.
URonaldo Nazario de Lima noMndeni
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -Ubuhlobo neNdodana yokuqala, uRonald.
Bangabangani abangcono kakhulu. Akunakho ukungaqiniseki mayelana nobukhulu babo. Ayikho imizwelo engafakiwe phakathi kukaRonaldo (ubaba) noRonald (iNdodana).
NjengoBaba Ofana Nendodana- Ronaldo noRonald
URonald uthola okuningi kubazali ikakhulukazi ekuhlinzekeni, ekukhuliseni nasekuqondiseni.
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -Ukuqala Ngaphambi Kwebhola
Ukuqala kukaRonaldo ekuqaleni kwebhola
Ezinyangeni ezimbalwa ze-6 ngemuva kokuthi athathe ibhola, uRonaldo Luis Nazario de Lima waba ilunga elivamile kuwo wonke umdlalo webhola owahlelwa endaweni yakubo. Wathola ukusekelwa ngokugcwele kubangane bakhe nomakhelwane ababewazi izibikezelo zakhe futhi befuna ukuba athuthuke ngokushesha. Ukuqala kokuqala kwebhola kwaqala emigwaqweni yaseBento Ribeiro, isigodi saseRio De Janeiro. Kwakungendawo futhi lapho ukuphakama kwakhe okungahle kwenzeke khona kuze kube sekugcineni kwebhola lezwe lomhlaba laqala.
URonaldo wasebenzisa wonke amathuba anikezwe wona ukuze abonise amakhono akhe emigwaqo eguquguqukayo ensimini. Ukusebenza kwakhe ngokuzikhandla kwanikezwa njengoba ehlongozwa yinkolelo yaseBrazil uJairzinho ngaleso sikhathi owayengumqeqeshi webhola ne-scout. Lapho efakaza amandla akhe, uJairzino wanxusa umnyaka we-16 ubudala ukuthi abe yiqembu lakhe langaphambili le-Cruzeiro.
Ngesikhathi sakhe sokuqala neqembu, uRonald waqeda irekhodi ngokufaka amagoli ama-44 emangalisayo emidlalweni ye-44. Ukwenyuka kwakhe kokunyakaza, ukulinganisela komzimba okunamandla kanye nokulawula okude kanye nekhono lokunciphisa wonke ama-pundits e-football nabalandeli. Ukusebenza kwakhe okuqhubekayo kwasiza leli qembu ukuba liqhube phambili ekuqhumeni kweBrazil Cup ku-1993. Ngesinye isikhathi, wonke umuntu waqala ukumbiza ngokuthi 'I-New Pele ' ngenxa yephethini yakhe yebhola efana nekaPele lapho eqala ngesikhathi esifanayo ku-1958. Kwasithatha isikhathi esincane ngaphambi kokuba uRonaldo athole ukuhlonishwa okukhulu kwezwe ngesikhathi esincane se-17.
UMoreso, ukusebenza kwakhe kwamnika ithikithi elizenzekelayo kwikomiti yezwe ye-1994 eyayibanjwe e-United States. Nakuba ebheke umncintiswano ebhentshini njengoba abantu bakuleli zwe bewina iNdebe.
Ngokushesha, amazwi kaRonaldo amnandi kakhulu asakaze emazweni aseYurophu ngenxa yokufakwa kwakhe eqenjini le-1994 World Cup, futhi ekugcineni wagxeka yiPiet De Visser omkhulu, wabe esengomunye wabadlali abahamba phambili emdlalweni webhola owake wathola uRonaldo i-compatriot Romário.
Ukusebenza kwakhe ezingeni lendawo kwamnqoba ukudluliselwa ku-PSV Eindhoven ngemuva kweNdebe yoMhlaba.
URonaldo wamukelwa ngoba kwakuyisiko labadlali baseBrazil bavame ukuya eHolland noma eFrance ukuze bafunde umdlalo waseYurophu ngaphambi kokuhamba kwabo okukhulu. I-Ronaldo ishaya phansi lapho isivumelwano sakhe sithengiswa ku-PSV Eindhoven eNetherlands ku-1994, ngokulinganisa umgomo ngamunye ngomdlalo ngokuncintisana okuphezulu kwe-Europe.
Wachitha izinkathi ezimbili eParv Eindhoven amagoli we-54 emidlalweni ye-57.
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -Unyaka ongenakulibaleka 1996
Kwakuyihlobo le-1996. Unyaka lapho kwenzeka izinto eziningi. Unyaka uMichael Johnson wathola igolide eliphindwe kabili e-Atlanta Olympic. Ngonyaka uNgilandi yayingene futhi yafika cishe ekupheleni kweMidlalo YaseYurophu. Ngonyaka izintambo ezinhlanu zezinkinga okuthiwa i-The Spice Girls zithunyelwa zisitshela ukuthi zifunani, ukuthi zifunani ngempela. Unyaka u-Hotmail usanda kuqalwa. Ngonyaka ama-Fugees asibulala ngeso lengoma leyo ngoma. Unyaka uNelson Mandela wehla njengeNdunankulu waseNingizimu Afrika. Unyaka uCharles noPrincess Diana babesayina amaphepha ehlukaniso.
Ngaphezu kwakho konke,
kwakungumnyaka igama elithi Ronaldo Luis Nazario de Lima waba igama lomndeni lapho kunakekelwa umhlaba jikelele. Lona unyaka weBarcelona, ​​wathatha ingane encane eneminyaka engu-19 (Ronaldo Luis Nazario de Lima) esuka ku-PSV Eindhoven owayengakwazi ukufaka imigomo yokuzijabulisa.
Kwakungaleso sikhathi uSir Bobby Robson kanye Jose Mourinho wasebenza noRonaldo njengomphathi weBarcelona nomphathi osizayo.
U-Ronaldo uzohlala kuphela neBarcelona ngenkathi eyodwa, kodwa ube nomthelela omubi ngesikhathi sakhe neqembu.
URonaldo uhola leli qembu ku-UEFA Cup Winners 'Cup noCopa del Rey.
Uzohlala kuphela neBarcelona isikhathi esisodwa, kodwa ube nomthelela omubi ngesikhathi sakhe neqembu. Uthole imigomo ye-47 emidlalweni ye-49 futhi waba ngumdlali omncane kunabo bonke abazobe banqoba umdlali wezwe weFIFA womklomelo wonyaka, irekhodi elikhona kuze kube manje.
Eminyakeni eyi-20 ubudala, u-Ronaldo wayebonisa izinga lokuqeda umhlaba ongakaze ubone ngaphambili.
Ngamazwi akhe ... "Ngithanda ukushaya amaphuzu ngemuva kokudlula bonke abaphikisi kanye nomgcini. Lokhu akuyona okukhethekile kimi, kodwa umkhuba wami. " - Ronaldo.
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -I-Inter Milan Call
Imali yaqala ukukhuluma ebhola ibhola ngonyaka we-1998. Ngalo nyaka, iBalcelona yamukela ukukhishwa kwerekhodi emhlabeni jikelele weMillion 18 kusukela ku-Inter Milan kuRonaldo.
Akekho ozobuyela emuva enselele, uRonaldo wathuthela emaqhingini ase-Italy. Isikhathi sakhe sokuqala sasiyinto evamile kulokho izwe eliye lalindela kusuka kusidlali senkanyezi - ezinye izinhloso ze-34 zilandelwe, futhi amarekhodi amaningi aphukile.
URonaldo waba ngumdlali wokuqala ozobuyela emuva emuva kumdlali weFIFA World Player wezinkokhelo zonyaka, ngenkathi edonsa iBalon D'or ehloniphekile.
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -Iphephelo leNdebe Yezwe le-1998
Ngokuya ngasekugcineni kweNdebe yoMhlaba, lowo owadlalwa ku-1998 phakathi kweBrazil neFrance akakwazanga ukuba nombhalo ongcono. Ngesikhathi iBrazil ibheke ukuvikela umqhele abawuthole e-1994, eFrance babedlala ekhaya, befuna ukunqoba i-Golden trophy okokuqala. Umdlalo ubuye wabona izinkondlo ezimbili zithandana, kanti uZinedine Zidane ubhekene neBrazil Ronaldo, yena ngokwakhe owaba nengxabano emnandi eyashiya bonke abalandeli bakhe ukuba badideke.
Cabanga ngalokhu- Ronaldo, umfana waseBrazil, obekulindelwe ukuhola uhlangothi olubhekene neFrance eqhubekayo wagula amahora nje ngaphambi komdlalo.
Lezi zimbiko zivele zenzele izindaba ezintsha umbulali ayebhekene nesisu esithukuthele. Izizathu ezengeziwe zavela, kusukela ekudleni kokudla kuya ezinkingeni zomuntu siqu ekuphileni kwakhe kothando. Ekugcineni, leli qembu elivusa amadlingozi livezwe udokotela weqembu laseBrazil uLiedio Toledo: URonaldo uphuthunyiswe esibhedlela ngemuva kokuhlukunyezwa ngesikhathi elala ebusuku ngaphambi kokugcina.
Uhlehlisiwe eqenjini lokuqala wabe eshaywa esibhedlela ukuze enze ukubuyela okumangalisayo emaminithini eqembu ngaphambi kokukhipha.
Kodwa-ke kwakukhona elinye iphutha kule ndaba. Esikhundleni sokuhola iBrazil ngenhlonipho yeNdebe yoMhlaba, uRonald akazange akwazi ukuguqula ukugula kwakhe kanye nokusebenza okungezansi komdlali obevumela uZinedine Zidane ukuba athole amaphuzu amabili eFrance ehamba phambili eqenjini elidumile le-3-0 eBrazil.
"Silahlekelwe iNdebe yoMhlaba kodwa nginqobe enye indebe - impilo yami" - Ronaldo (mayelana nokugcina kweNdebe Yezwe le-1998)
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -Indaba Yokulimala
Abaningi bebhola lezinyawo abanobuhle baye baba nokulimala emsebenzini. UMichael Owen, owake wabesaba ngenxa yomlilo wakhe, wabhekana nokulimala okufanayo noRonaldo futhi akakwazanga ukubuyela ekubeni yingxenye yomdlali owayekade ekhona. UPaul Gascoigne, izinkuni zeTiger, Joe Cole, Gary Neville nabanye abagijimi abaningi baye baba nokulimala kokuphela komsebenzi futhi abakwazi ukubuyela esimweni sabo esingcono kakhulu.
Kunomugqa omncane ohlukanisa omkhulu, kusukela kokunye. Kuyinto impela umsebenzi onzima wokuba ngcono. Kwenzekani kakhudlwana? Ukuze ube yi-best, ewe, ibhalwe phansi bese uvuka ukuze ube ngcono kakhulu. Lena indaba yokulimala kaRonaldo Luis Nazario de Lima.
I-1998 WORLD CUP INJURY NOKUPHILA- Walimala ngesikhathi ephikisana nomgcini waseFrance, uBarthez ekomidini lezwe le-1998.
Wabe eseziphindiselela kuBarthez, owayesebenzile wamlimala e-98 yomdlalo wokugcina weNdebe yoMhlaba, ephethe ijaji elimangalisa eManchester United, okwakumenzele ukunyuka kwe-Old Trafford ethembekile.
I-1999 / 2000 INJURY NOKUPHILA- NgoNovemba 21st I-1999, inhlekelele iphinde iphinde ibanjwe, njengoba uRonald ephule ithanga lamadolo ngenkathi edlala e-Serie A ngokumelene noLecce.
Ngemuva kokuhlinzwa kanye nezinyanga ze-5 zokuvuselelwa, iBrazilian yenza ukubuyela kwakhe ekupheleni kweCoppa Italia ngokumelene noLazio, kodwa noma yikuphi ithemba lokubuyela emuva kwezinganekwane laphulwa ngemuva kokulimala okwesibili, ukulimala kakhudlwana emadolweni afanayo ngemuva kwemizuzu engu-7 ensimini . Wathwala umqashi.
Ngeke adlale futhi kuze kube sekupheleni kwesikhathi se-2001 / 2002. Ngokweqile, wayephelelwe unyaka. Uvele wabonakala emidlalweni eyishumi nesithupha futhi wabamba imigomo ye-7 kuphela ye-Inter leyo nkathi.
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -Thumela i-Inter Milan Era
Ngemuva kokuthi abuyele emuva, uRonald wenza umzamo okwanele wokuphoqa umphathi weBrazil uLuiz Felipe Scolari ukumfaka eqenjini lakhe ngeNdebe Yomhlaba ye-2002 eJapane / Korea. Njengoba evuselele umdlalo wakhe ukuze athathe ukuthembela kwakhe ngokusheshisa nangokushesha, uRonaldo wayengumdlali ohlukile ngesikhathi sakhe sokulimala. Wathembela okwengeziwe ngamandla futhi iso elithuthukisiwe lomgomo. Lokhu wathola ngokusebenzisa isipiliyoni. Wembule isitayela sakhe esisha sokudlala emthonjeni oholela ekubhubhiseni - ehola iBrazil kuze kube sekugcineni kanye nombukiso weJalimane. Yonke inkulumo esengaphambi komdlalo igxile kuRonaldo ukunqoba amademoni akhe ku-1998 - futhi yabanqoba.
I-Brazilian ivule isitayela sakhe esisha kwikomfa lezwe le-2002 ukuze lidale umonakalo lapho ehola iBrazil eya kwelinye indebe yomhlaba wokugcina futhi ehola imigomo ye-2. Wathola imigomo ye-8 kulo mqhudelwano futhi wayinqoba i-MVP. Uphinde wanqoba umdlali wezwe weFifa noLaureus babuya umklomelo wonyaka ngalowo nyaka.
Ukusebenza kwakhe kwamthola enye imali yokudlulisa irekhodi emhlabeni jikelele, ngalesi sikhathi i-39 million, njengoba iMal Madrid immemezele ekucaleni kwayo kweGalacticos. Naphezu kokubekwa phakathi kwaphakathi kuka-Okthoba, abalandeli beReal Madrid bamamukela uRonaldo nge-heroes reception - ebiza igama lakhe emidlalweni engakaze ayifake futhi ephule amarekhodi okudayiswa kwempahla. Ngokwenza lokho ayekade ekwenza kahle, uRonaldo wabonga abalandeli ngezinhloso ze-2 ekuqaleni kwakhe. Wabe esekela imigomo ye-30 endleleni yokuwina iLa Liga nge Madrid.
Naphezu kokulimala okulandelanayo, uRonald uzoqhubeka nokufaka imigomo ye-104 emidlalweni ye-184 yeMadrid phakathi nenkathi ye-5 iminyaka eqenjini.
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -I-Post Madrid Era (I-Crisis Injury ne-Comeback)
URonado akajabule nomphathi weMadrid Fabio Capello ku-2006, futhi ngemuva kokusayina kukaRuud Van Nistelrooy waseManchester United, izinsuku zakhe eBernabeu zibalwa.
NgoJanuwari 27th 2007, uRonaldo wasayinela i-AC Milan emkhakheni owu-€ 7.5 wezigidi.
NgoFebhuwari 13th 2008, emdlalweni weligi ngokumelene neLiborno, uRonald wadluliselwa ensimini ngemuva kokuhlukunyezwa kwegciwane le-kneecap ngemuva kokuzama ukuhlula ibhola.
Kwaba yingxenye yesithathu uRonaldo ebhekene nokulimala okunjalo, futhi ngisho neDeman Fitness Lab idume kakhulu ithemba lakhe lokuthi uMaran akazange aphinde avuselele isivumelwano sakhe ekupheleni kwenkathi naphezu kokushaya imigomo ye-8 emidlalweni ye-20.
Ngokusho kukaRonaldo, "Ukuphila kwami ​​bekulokhu kuyinkinga eminingi futhi ngilungele ngokwengqondo, kodwa lokhu kuyinselelo enkulu ekuphileni kwami." - Ronaldo
Ngaphandle kwesenzo esingaphezu konyaka, uRonaldo wathembisa ukufakazela ukuthi wonke umuntu uyiphutha futhi ubuyela ekulimazeni kwakhe okwesithathu. Ukubuyela ezweni lakubo wabona isibonakaliso sezinkanyezi kwabaseKorinte, lapho athola amaqhawe amukele lapho evula khona.
Naphezu kokuba yizinyanga ezingu-13, uRonaldo wazisiza ezinjongweni ze-30 ekubukeni kwe-55, esiza iqembu lakhe ukuba libhekane neligi nekomidi kabili. Kukhona futhi izingcingo ezivuselelwe ukuba abuyele emuva eqenjini laseBrazil iphinde ibuyele neNdebe yoMhlaba ye-2010. Lokhu akuzange kudlule.
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -Ukuphatha iNdebe Yomhlaba Yokugcina
URonaldo wadlala ekhompyutheni yezwe le-2006 naphezu kokungabaza okukhulunywe ngenxa yokuqina kwakhe nesisindo sakhe. Uqedile ukuphula amarekhodi kaGerd Muller futhi waba ngumdlali wenkomfa yezwe emhlabeni wonke ngezinhloso ze-15.
Ufeze lokhu nje, ngomgomo wokuhweba ngokumelene neGhana ngoJuni 27th, ebamba umgomo wakhe we-15th kumncintiswano wokugcina weNdebe yoMhlaba. IBrazil izodingeka iqedwe yiFrance ekupheleni kwekota.
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -Ukubhekana Nezinkinga Zesisindo
URonaldo, wakhathazeka ngokuthola isisindo esikhulu esikhathini esizayo somsebenzi wakhe.
Ucwaningo lwezokwelapha lwembule ukuthi une-hypothyroidism - isifo esithinta umzimba wegazi.
Ngokusho kukaRonaldo, "Lapho ngiphenywa, ngathola ukuthi ngibhekene nokukhononda okubizwa ngokuthi i-hypothyroidism, okunciphisa umzimba wakho, futhi ukuyilawula kufanele ngithathe ama-hormone angavunyelwe ebhola ngenxa yemithetho yokulwa ne-anti-doping (imithetho). Ngesaba ukuthi umsebenzi wami ususondele. "
URonaldo wabe esethembisa abalandeli bakhe ukuba baqhubeke bekulwela ukulahlekelwa isisindo sakhe. Wena, Akazange abanikeze isiqinisekiso. Ngesinye isikhathi, kwafika kuwo wonke umuntu ukuthi yonke ithemba lalahleka ngemuva kokuhlukunyezwa okukhulu.
Akazange asebenze kanzima ngokwanele ukuze aphinde avuselele.
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -Ukumemezela umhlalaphansi wakhe
Isidlali sezwe seFIFA esinesithathu sonyaka uRonaldo umemezele ukuthi uhlala emdlalweni webhola ngoMsombuluko othize kulokho okwakuthiwa yinkomfa yocindezela emoyeni eyaqeda umsebenzi wakhe we-18. URonaldo ekugcineni wamemezela umhlalaphansi wakhe ngoFebhuwari 2011.
Ngokusho kukaRonaldo- "Umsebenzi wami wawuhle futhi omuhle. Nginqobe eziningi kodwa nginqobe ukunqoba. Kunzima kakhulu ukushiya okuthile okwangenza ngijabule kakhulu. Ngokwempela, ngangifuna ukuqhubeka, kodwa kufanele ngivume ukuthi ngilahlekile ukulwa emzimbeni wami. "
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -Izwe elingenabulungisa (Ukumfanisa noCristiano Ronaldo)
Into yokuqala efika engqondweni yethu lapho umuntu ekhuluma ngegama elithi Ronaldo nguCristiano Ronaldo, i-Cr7, i-Cr9. U-Luis Nazario De Lima Ronaldo uvame ukubizwa ngokuthi, 'Fat Ronaldo', 'Amafutha (amanoni) uRonaldo', 'Mottai (ibhaluni) uRonaldo', 'Izinwele eziziqhenya zidonsa uRonaldo', 'Omunye uRonaldo'.
Abalandeli abaningi bakaRonaldo de Lima bazizwa bebuhlungu ngempela lapho umuntu omkhulu njengalokhu ehliswa emazingeni aphansi kangaka futhi akhunjulwa ngalokho akwenzile, kodwa ukuthi ulinganisa kangakanani noma ubuchopho bakhe bunjani. Lesi esinye sezizathu zokuthi kungani i-LifeBogger inqume ukuthatha isikhathi futhi ibhale ngomdlali okungenzeka ukuthi ugqozi olukhulu lwabalandeli bebhola.
Manje sikubuza, uzokukhumbula uRonaldo ngesisindo sakhe, noma ngesilinganiso sakhe sokulinganisa umgomo? Uyomkhumbula yini ngalokho akwenza ezinyaweni zakhe noma yini angayenza ngezinyawo zakhe?
Ngesikhathi esilandelayo othi othile uthi uRonaldo, uzocabangela yini i-winger yesiPutukezi ophumelele umklomelo womdlali wezwe weFifa owodwa noma iBrazil owawunqobile kathathu ?. "Yehlisa ukuphawula kwakho ngezansi ngalokhu ngemuva kokufunda lesi sihloko".
I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Indaba Yobuntwana Plus I-Untold Biography Facts -I-LifeBogger Rankings
Njengoba sekuqotshwe isikhathi esingaphansi kathathu emsebenzini wakhe, manje uyazi ukuthi uyajabula ekuboniseni ukungabaza kwakhe okungalungile. E-Ronaldo, sinomdlali oye waphoqelelwa ukuba athuthukise ngokuphelele umdlalo wakhe kathathu ngokulimala ngenani elilinganiselwe lezinyanga ezingu-36. Yilokho esikucabanga ngaye emazingeni ethu ngezansi.
Iphone 5C evuselelwe Kwangathi 23, 2018 Kwa-9: 13 am
Indlela yakho yokutshela konke kulo mkhakha wokubhala empeleni iyamangalisa, bonke bayakwazi
ukukwazi kalula, Siyabonga okuningi.
UDavid Araniva NgoJuni 24, 2018 Ku-8: 49 am
Lokho kumnandi kakhulu. Ngiyazisa ukufunda indaba yakho. URonaldo usengumfana omkhulu. Siyabonga ukwabelana ngendaba yakhe.
Yebo Ngo-Okthoba 5, 2018 E-10: 50 pm
I-Cr9 yayiyi-balle enkulu yezinyawo. Futhi ngempela uqobo ngalesi sicijethi futhi ujabule ngaso